रुखा हृदयका झिना सन्तति
‘‘कौडीमा तक मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि ’’
२०७५ कार्तिक २२ बिहीबार १२:४७:००
लक्ष्मीलाई समृद्धिकी देवी मान्छन् पूजा गर्नेहरू ! लक्ष्मीको पूजा नगर्नेहरू पनि तिहारलाई ज्योतिको पर्वका रूपमा मनाउँछन् । काग, कुकुर, गाई, गोरु र भाइको पूजा गर्ने चलन यम पञ्चकका पाँच दिनसम्म । नेवारहरूले आत्म (ह्म) पूजा पनि गर्छन् । तिहार मनाउने क्रममा धेरैले बुधवार लक्ष्मीको पूजा गरियो । लक्ष्मी पूजाको दिन नेपालीहरूका लागि अर्को विशेष पर्व पनि हो । यही दिन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि जन्म भएको थियो । नेपाली समाजले भने बाँचुन्जेलमात्र हैन मरेपछि पनि उनको कदर गर्न सकेन । नत्र, लक्ष्मीपूजाका दिन महाकवि देवकोटाको जन्मजयन्ति निकै धुमधामसँग राज्यले नै मनाउनु पर्थ्यो ।
लेखनाथ पौड्यालले ‘नैतिक दृष्टान्त’ शीर्षकको कवितामा लेखेका छन् : ’’गुणग्राही जहाँ छैन वहाँ के गरला गुणी । कौडीमा तक मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि ।। ’’ महाकवि देवकोटाप्रति नेपाली समाज र राज्यको व्यवहारको चित्रण यी पंक्तिहरूमा भएको छ । यद्यपि, कविशिरोमणी पौड्यालले महाकवि देवकोटालाई लक्षित गरेर यी पंक्ति लेखेका भने हैनन् । साहित्यमा संसारका सामु प्रस्तु्त गर्न सकिने प्रतिभा नेपालमा अत्यन्त थोरै छन् । तिनमा एक जनामात्र छान्नु परे निर्विवाद लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा छानिन्छन् । त्यसमा पनि स्वच्छन्दतावादी (रोमाटिक) धाराका कविमा त देवकोटा विश्वप्रतिभा नै हुन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायनले उनलाई त्यसै ‘पन्त, प्रसाद, निराला’को समन्वित रूप भनेका हैनन् । साहित्यका अध्येता भन्छन् – कल्पनाको उडान र भाव समायोजनमा देवकोटालाई उछिन्ने प्रतिभा विश्वमै सायद अर्को छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामबाट सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सन्देशले भने अलिकति उत्साह जगाएको छ । सन्देशमा लेखिएको छ – ‘‘महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निवासलाई परिवारसँगको परामर्शमा उपयुक्त मूल्य तय गरी सरकारले खरिद गर्नेछ र त्यसलाई देवकोटा स्मृति संग्रहालयका रूपमा स्थापित गरिनेछ । उहाँजस्तो विश्वस्तरीय नेपाली साहित्यकारको जीवनसँग जोडिएका तथ्य र सामग्री संग्रहित हुनेछन् । ’’ यस महान् सोच र प्रतिबद्धताबाट प्रधानमन्त्री ओली धन्यवादका पात्र भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो घोषणा यथाशीघ्र कार्यान्वयन होस् । विकासे गफ साबित नहोस् । अझ महाकवि देवकोटाका कृतिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, प्रकाशन र अनुवादसमेत गर्ने गरी राज्यबाटै स्वायत्त प्रतिष्ठान गठन होस् र देवकोटा संग्रहालय त्यसैमा आबद्ध गरियोस् । त्यतिमात्रै पनि भयो भने महाकवि देवकोटाका यी पंक्तिहरू अतीतकै चित्रणमात्र हुनपुग्नेछन् । अहिले त यिनले नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गरेका छन् । शाकुन्तल महाकाव्यको प्रथम सर्गको एउटा श्लोक :
’’बिर्सेका पुरुखा रुखा हृदयका सुख्खा झिना सन्तति
हामी दुर्बल रुग्ण खाडल खनी हाल्दा सबै सम्पति
फालेका कलिकालकल्मष बली गर्दा सधैँ खल्बली
श्रद्धा भक्तिविहीन भै मुटु जली लाग्यौँ नि ! जानै ढली ’’
(शाकुन्तल महाकाव्य १. ४)
सबै नेपालीकाे सुख र समृद्धिका लागि तिहारको हार्दिक शुभकामना !